China Iifudumalo ezishushu s01G mveliso kunye nabenzi | Ngomhla
Umsebenzi ophambili: UMSINDISI HIikawusi ezityiweyo ziya kuyenza imozulu yakho ebanda kakhulu ukuba ibenakho ukunyamezeleka kwaye iyonwabise. Nokuba kuyasebenza, ukuskiya, ukukhwela ikhephu, ukuhamba ngekhephu, ukuhamba ngeenyawo kwikhephu, ukuzingela, ukuloba umkhenkce, ukuntywila ngesithuthuthu, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, umhlakulo, nokuba ngubani onyawo olubandayo.
Izinto eziphathekayo: 55% yeColormax + 25% Elastic + 20% Spandex
Iphedi yokufudumeza: 7.4V 4W, izinto zokufudumeza ifayibha edityanisiweyo
Isilawuli: 3 amanqanaba obushushu kulawulo, phezulu / phakathi / ezantsi (99% -66% -33%), 35135DC isinxibelelanisi samadoda.
Inqanaba eliphezulu (Bomvu): ≈65 ℃ 3.5-4 iiyure;
Inqanaba eliphakathi (Mhlophe): -55 ℃ 5.5-6 iiyure;
Inqanaba eliphantsi (Luhlaza): -40 ℃ iiyure ezili-10-11;
Ibhetri: Umgangatho ophezulu we-7.4V 2200mAh i-lithium polymer battery pack, i-35135 yabasetyhini i-DC
Itshaja: 8.4V 1.5A, itshaja-intloko ezimbini, 35135 eyindoda DC isinxibelelanisi. I-US, iYurophu, i-UK kunye ne-AU plugs kukhetho
Iphakheji: Ngokuqhelekileyo ibhokisi yesipho / ibhokisi yemibala (Ubungakanani bebhokisi: 14.84 x 5.31 x 2.72 intshi)
● Isibini esinye Iikawusi ezifudumeleyo
● 2pcs Iibhetri ezinokutsha kwakhona
● 1pc Itshaja ezimbini
● 1pc Incwadi yomsebenzisi
● 1pc Ibhokisi yezipho ezintle
Elungiselelweyo MOQ Product: 1000 ngababini
Iphakheji eyenziwe ngokwezifiso: 1000pcs
1. Ukufunxa, ukuphefumla, ukomisa ngokukhawuleza, ukujiya, sebenzisa imodyuli yokufudumeza umbane ecekeceke. Isithende esiqinisiweyo kunye nesithende sokuqina esifanelekileyo kunye nezinto zokufudumeza ezingagungqiyo zinceda ukugxila kubushushu kuzwane ukugcina iinyawo zakho zishushu kwimozulu ebandayo.
2. Izinto zokufudumeza ifayibha edibeneyo, ezikhuselekileyo ngakumbi kwiinyawo zakho.
3. Indawo yokufudumeza igubungela yonke iinzwane, i-instep, kunye neenyawo zangaphambili.
4. 7.4V iphakheji yebhetri ye-lithium-ion egcwalisekayo e-A-grade, ekhuselekileyo nephathekayo, amandla anamandla, kunye nebhetri eneziqinisekiso ze-CE / ROHS / FCC / UL;
5. Amanqanaba amathathu okulawula ubushushu anokutshintsha utshintsho lobushushu obahlukeneyo ngokobume obahlukeneyo. Ubomvu we-LED ubushushu obuphezulu, umhlophe kubushushu obuphakathi, buluhlaza kubushushu obuphantsi.
6. Isicelo: Ikhaya langaphakathi, kunye nemisebenzi yangaphandle: inkampu, ukuzingela, ukuloba umkhenkce, ukuhamba ngebhayisikile, ukukhwela ibhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile, ukubaleka, ukuskiya, ukukhwela ikhephu nayo nayiphi na eminye imidlalo yangaphandle.
7. Umgangatho ophezulu emva kweNkonzo yokuThengisa.
Ukutshintshwa kweenyanga ezili-12 ngayo nayiphi na imiba enxulumene nomgangatho.
Zonke iimveliso zethu ezishushubezelayo zifezekile emva kwenkxaso yenkonzo yokuthengisa. Ukuba unemibuzo malunga nomgangatho, ubungakanani, ibhetri okanye itshaja, nceda usithumelele i-imeyile, sikulungele ukukunceda.
● Ukutshaja-Ukutshaja ngokupheleleyo iibhetri ngaphambi kokuzisebenzisa.
● I-plug-in-Qhagamshela ibhetri kwiplagi ebekwe epokothweni.
● Vula- Cofa ixesha elide kwimizuzwana emi-2 ukuvula isilawuli.
● Cofa ixesha elifutshane ukuze uhlengahlengise amanqanaba obushushu
● Cima u-Cofa ixesha elide ukucima isilawuli.
Ukwazi njani ukuba ibhetri ihlawulwe ngokupheleleyo?
Ukukhanya kweAdapter yeshaja kubomvu: Ukutshaja;
Ukukhanya kweAdapter yeshaja kuluhlaza: Kuhlawulwa ngokupheleleyo.
(Kuthatha malunga neeyure ezi-3.0-3.5 ukuhlawuliswa ngokupheleleyo iibhetri ezi-2pcs)
Susa iibhetri ngelixa uhlamba iikawusi.
Ukuhlamba izandla kuyacetyiswa ukhuseleko ngakumbi.
Ukuba kufuneka uhlanjwe ngomatshini ke kucetyiswa ukuba usebenzise ibhegi yesaka.
Egqithileyo Ibhetri egcwalisekayo evuthayo yeGlave Liner I-Gloves eshushu ebushushu
Okulandelayo: Iikawusi shushu SS02B